12 August- Maalinta caalamiga ee dhallinyarada | Radio Himilo
Home / Maalmaha Caalamiga / 12 August- Maalinta caalamiga ee dhallinyarada
12 August- Maalinta caalamiga ee dhallinyarada
Posted by: Mahad Mohamed August 12, 2020
Himilo – Ku dhawaad 1.8 Bilyan oo dhallinayaro ah oo da’dooda u dhaxayso 10 illaa 24 jir ayaa ku nool caalamka. Waa tiradii ugu badneyd ee da’yar ah. Si kasta, kala bar carruurta iyo qaangaarka ayaan helin xirfadaha akhrinta aas-aasiga ah ee xisaabta inkastoo intooda badan ay ku jiraan dugsiyada.
Maalinta caalaamiga ah ee dhallinyarada waxaa la asteeyay sannadkii 1999-kii oo golaha guud ee QM uu isku raacay in laga dhigo maalin loo dabaal deggo kaalinta da’yarta leh rag iyo dumar ee isbadalka iyada oo loo arkayo fursad kor loogu qaadi karo wacyiga la xiriira caqabadaha ay wajahayaan dhallinyarada dunida.
Hal-ku-dhegga sannadka 2020 ee maalinta caalamiga ee dhallinyarada ayaa loo qaatay“ Falgalka da’yarta ee tallaabo caalaami ah ,” si loo dhiira geliyo kaalintooda heer dal ama caalami.
Mid kamid ah ujeedooyinka maalintan ayaa ah in la qiimeeyo sida dowladaha, da’yarta iyo ururada ay hoggaamiyaan dhallinyarada ay u beddali karaan waxbarashada si ay u noqoto awood weyn oo lagu gaaro yoolalka Qaramada Midoobay.
Kaalinta muhiimka ah ee waxbarashada ka ciyaari karto horumarka dhallinyarada ayaa si weyn loo aqoonsan yahay. Waxaa kale oo muhiim ah in la xuso in da’yarta leeyihiin awoodda ah inay qudhooda hormuud u noqdaan yoolalka la hiigsanayo, taasina waxaa lagu xaqiijin karaa marka laga faa’iideysto hal-abuurkooda.
Previous: Seddex koox oo xiiseynaya Ainsley Maitland-Niles
Next: Wijnaldum oo wali wadahadallo ka sugaya Liverpool
Gabadha heysata horyaalka Feerka dunida oo qaadatay diinta Islaamka
Munirah: Waxey ku qaadatay 40 sano si ay gurigeeda kaga dhigto Madxaf
Muslimiinta Athens oo helay Masjid ay ku oogaan salaadaha